Activities | Mahasi Sasana Yeik Tha
ယနေ့ မနက်အာရုဏ်ဆွမ်းစားရန်သံဃာတော် များကြွလာစဉ်နှငိ့ဆွမ်းခံကြွရန်အတွက်တန်း စီကြွရောက်စဉ် မနေ့ကအထိယောဂီပေါင်းသံ ဃာအပါအဝင်(၁၆၅၇)ဦးရှိပြီးယနေ့အကြိုနေ့ ထပ်မံဝင်ရောကိလာပါကနှစ်ထောင်နီးပါးရှိနိုင် ပါကြောင်း။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သက်တော် (၁၁၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပူဇော်ပွဲ
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးရှိ ချမ်းသာကြီးတန်ဆောင်းတွင် မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ
ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.)
နာယကဆရာတော်များ၊ ၀န်ဆောင်ဆရာတော်များနှင့် တရာစခန်းဝင် သံဃာတော်များ၊ ယောဂီများ၊ အဖွဲ့ကြီး(၃)ဖွဲ့မှ အမှုဆောင်များက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သနေစဉ်။
နေပြည်တော်-ပျဉ်မနား ဆရာတော်ကြီးမှဝါဆို-၀ါကပ် တရားစခန်းဝင်ကြသော သံဃာတော်နှင့်ယောဂီများအားသြ၀ါဒပေးနေစဉ်။
မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ(သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) ၏ သြစတြေးးလျနိုင်ငံ၌ တရားစခန်းဖွင့်ပွဲအပြန် သြ၀ါဒချီးမြှင့်ခြင်း။
မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) မှ
မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ သြ၀ါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ သာသနာဓဇသရီပ၀ရဓမ္မာစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ) (Ph.D) (နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား ဆရာတော်ကြီး) နှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌကြီး ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်းတို့သည် သြစတေးလျနိုင်ငံတွင် တရားစခန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
(၆၆) နှစ်မြောက် မဟာစည်သြ၀ါဒခံယူပူဇော်ပွဲကြီး
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော မဟာစည်သြ၀ါဒခံယူပူဇော်ပွဲကြီးကို (၆၆)-နှစ်မြောက်အဖြစ် အမှတ်(၁၆)သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကြီးတွင် ၁၅၇၅-ခုနှစ်၊ နတ်တော် လဆန်း (၁၁)ရက်နေ့မှ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့ထိ၊ ၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၇)ရက်နေ့ထိ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလျှက်ရှိပါသည်။